SAWIRO:- Askartii ugu badnayd ee ku dhaawacantay Dagaalkii shalay oo Muqdisho la geeyay + Kheyre oo Booqday. – Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
HomeFaalloyinkaSAWIRO:- Askartii ugu badnayd ee ku dhaawacantay Dagaalkii shalay oo Muqdisho la geeyay + Kheyre oo Booqday.
SAWIRO:- Askartii ugu badnayd ee ku dhaawacantay Dagaalkii shalay oo Muqdisho la geeyay + Kheyre oo Booqday.
February 20, 2020 marqaan Faalloyinka, Somali News 0
Ra’iisul Wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa Isbitaalka xoogga ku booqday askar ka tirsan xoogga dalka oo ku dhaawacmay deegaanka Ceel-saliini ee gobalka Shabeellada Hoose, oo ay arbacadii shalay weerareen Xoogag ka tirsan Al Shabaab.
Xasan Cali Khayre ayaa Maamulka Isbitaalka ka waraystay Xaalada Caafimaad ee askarta ku dhaawacantay duulaan Al shabaab ku qadeen deegaanka Ceelsaliini ee Gobolka Shabeellah hoose,waxa uuna u rajeeyay Caafimaad deg deg ah.
“Ra’iisul wasaaraha oo maamulka Isbitaallada xoogga ka waraystay xaaladda caafimaad ee ciidanka naftood hurayaasha ah ee ku soo dhaawacmay ilaalinta iyo badbaadinta nafta iyo hantida ummadda Soomaaliyeed dhaawacyada, ayaa halyaayada qaranka ee dhaawacyada qaba u rajeeyay in si dhaqsa u bogsoodaan askartii shahiidayna uu Allah Shahiidnimadooda ka aqbalo” ayaa lagu warsaxaafadeedka soo baxay Xafiiska wasiirka 1 aad ee Xukumadda.
Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Kheyre ayaa kormeeray dhaawacyada waxa uuna u mahadceliyay dagaalka ay kula jiraan Xoogga gacansaarka laleh Ururka Al Qaacida ee ka dagaalama Bariga Afrika,isaga oo bogaadiyay dagaalka ka dhan ah Al shabaab.
“Geesiyaasha dhaawacyadu kusoo gaareen badbaadinta qarannimada, nafta iyo hantida ummadda Soomaaliyeed ayaa Ra’iisul wasaaraha uga mahadceliyay booqashada iyo dhiirri gelinta waxayna ballan qaadeen in marka ay soo bogsadaan ay dib ugu laabanayaan furimaha dagaalka si ay qayb uga qaataan dadaallada cawadga looga xoreynayo qaybaha ay dalka uga suganyihiin” ayaa lagu yiri qoraalka.
Al shabaab oo shalay aroornimadii weerar ku ekeeyay Ceelsaliini ayaa sheegay in ay halkaasi ku dileen Ciidamo ka tirsan kuwa Xoogga dalka sidoo kalana ay ku qaateen saanad milatiri,inkastoo taliska Ciidanka Xoogga dalka uu arintaasi beeniyay sheegana in ay khasaaro Xooggan gaarsiiyeen Al shabaab.
Bishii September 29-keeda sanadkii hore 2019, weerar noocaan ah oo Al-Shabaab ay isla saldhigaan ku qaadeen ayaa waxaa ka dhashay khasaaro culus,waxaana dowladda Soomaaliya talaabadaasi uga jawaabtay in xabsiga la dhigay Saraakiishii xeradaasi Maamulaysay oo lagu eedeeyay in dayaceen Ciidanka iyo gadiidkooda xerada ku sugnaa.
Gacanta Alshabaab waxaa Gowrdhaw ka baxday Degmo wayn oo ay ka talinayeen in kabadan 10Sano.